﻿ शिक्षकको समस्या नबुझेको की बुझ्न नचाहेको ?
संचालकरसंस्थापकहरूले पनि बढिभन्दाबढि फाइदा लिने यस्तो मौकामा यो सेवा नै हो भन्ने प्रचार गरिरहे । उनीहरूले “यो सेवाको व्यापार हो र हामी व्यापार गर्दैछौं” भन्न कतै पनि सकेनन् । लोभ न हो, उनीहरू निरन्तर यो लोभमा लागि रहे । अरुले स्कुल बोलिचालिको भाषामा बोर्डिङ (वास्तवमा बोर्डिङको अर्थ नबुझ्ने) खोलेर कमाएको देख्न थाले र यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान पछि राजनितिक दलहरूलाई गाउँघरसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन सजिलो माध्यम बने सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू । यतिबेलासम्म गाउँमा निजि स्कुल थिएनन् । पंचायती व्यवस्था रहुन्जेलसम्म सरकारी स्कुलहरूमा पढाइ स्तरिय नै थियो भन्ने यसरी पनि प्रमाणित हुन्छ कि अहिलेसम्म निजि स्कुलका संस्थापक र शिक्षकहरू अधिकांस त्यहिं कै उत्पादनहरू छन् । तर बहुदलिय व्यवस्था स्थापना भएपछि शिक्षकहरूलाई आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाउन थालियो । उनीहरूलाई पार्टीको काममा खटाउन थालियो । आफ्नो पार्टीको पकड दह्रो भएको ठाउँमा संचालक समितिको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई राख्न थालियो ताकी आफ्नो शिक्षक पार्टीको कामा खटिएको बेला किन अनुपस्थित भन्ने प्रश्न नगरियोस् ।
निजि स्कुल संचालन गरेर संचालकरसंस्थापकहरूले सबैले त होइन, २०/२५ प्रतिशतले प्रसस्त आम्दानी गरेर आफ्नो जीवनस्तर माथी पु¥याए । तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूभने कतिबेला आफू त्यहाँबाट कुन आरोपमा निकालिनु पर्ने हो भनेर डराइडराइ काम गर्नु परेको अवस्थामा गुज्रनु परेको छ । राम्रोसँग कमाइ भइरहेका निजि स्कुलहरूले पनि न्यून ज्यालामा शिक्षकहरू राख्ने र अधिकतम श्रमको शोषण भएको महशुस हुने गर्दछ ।
काम गर्ने र गराउने बीचको सहमति भएर ज्यालाको निर्धारण हुनु कुनै नौलो होइन । तर अन्य सेवा सुविधाबाट पनि बंचित गराइन्छ । राम्रोसँग चलेको र पुग्ने बिद्यालयले पनि चाडपर्व खर्च नदिने, दिनेहरूले पनि निजिको नियम भन्दै पहिलो बर्ष नदिने, दोस्रो र तेश्रो बर्ष २५ प्रतिशत, चौथो र पाँचौ बर्ष ५० प्रतिशत, छैटौं र सातौं बर्ष ७५ प्रतिशत गर्दै शतप्रतिशत पर्व खर्च पाउन आठौं बर्ष पुर्याउने स्कुलहरू छन् । अझ भनौं आफुले सुविधा लिनुपरे सरकारी नियम र दिनुपरे निजि संस्था भन्ने गर्दछन् ।
अझ कतिपयले त बिगत छ महिनादेखि पारिश्रमिक नदिएको सुनिन्छ । यसरी कामदारलाई पारीश्रमिक नदिने र आफू करोडौंको अचल सम्पत्ति यहि बेला जोड्नेलाई श्रम शोषण गरेको भन्ने कि नभन्ने ? कतिपय संस्थापकहरू भन्ने गर्नुहुन्छ ‘समस्या छ भने हामीसँग आएर भन्नुपर्छ कि बाहिर आन्दोलन गर्नुपर्छ ?’ यस्तो कुरामा एकपटक सोच्नुस् त । आएर कुरा राख्दा तपाईंहरूको जवाफ के हुन्छ ? अनि छ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको, तीन महिनासम्म केही नपाएको शिक्षकको समस्या बुझ्न नचाहेको हो कि नबुझेको हो ? संस्थापकहरू पनि पढेलेखेकै हुनुहुन्छ । यति कुराहरू भनेपछि मात्र बुझ्ने कि बोलाएर बुझ्ने र बुझाउने हो ? अझ कतिपय ठाउँमा त एउटा संस्थापकले दिन खोज्दा अर्कोले रोकेर “यस्तो गर्दा अरुलाई समस्या हुन्छ । त्यो स्कुलले दियो, हाम्रो स्कुलले किन दिएन भन्लान् । यस्तो नगर ।” भनिएको कुरा समेत सुन्नमा आएको छ ।